mero sathi tv	 २८ चैत्र २०७४, बुधबार ०६:१९ 0
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १७:१८ 0
Rashifal Uncategorized भिडिओ मनोरन्जन मेरो साथी टि भी रोचक समाचार
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १७:०५ 0
मुहारमा आउने डण्डिफोर र खिलबाट छुटकाराः पुदिनाको पातहरु सँगै ३ थोपा जती कागतीको रस मिलाएर मुहारमा लगाउने र पाँच मिनेट पछि यसलाई सफा गर्नु पर्दछ । एक हप्ता सम्म निरन्तर यसको प्रयोग गरेमा अनुहारमा आउने डण्डिफोर र डण्डिफोर बाट बनेका खिलबाट…
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १७:०० 0
पाइल्स रोकथाममा पनि मुलाभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन । मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुने गर्दछ । यसको सबैभन्दा ठुलो फाइदा यो हो कि मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या बढ्दा पनि बढ्दैन ।…
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:४६ 0
हिजोआजको भागदौडको जिन्दगीमा कतिपय मानिसहरु मोटोपनाका कारण अत्तालीएका हुन्छन् । समय अभावका कारण नियमित अभ्यास गर्न नसक्दा मोटोपना दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको हुन्छ । तर पनि हरेक रात सुत्नु अघि यि ५ उपाय अपनाएको खण्डमा तपाईको माटोपना कम हुन्छ ।…
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:४१ 0
कुनै पनि मानिसको पर्सनालिटी राम्रो देखाउनको लागि हाईट अर्थात् उचाईको महत्वपूर्ण हात रहन्छ। तर कसैको बच्चादेखि नै हाईट राम्रो हुन्छ त कसैको हाइट सानो हुनुले धेरै कुरामा समस्या परिरहेको हुन्छ। जस्तै आफु भन्दा कम उमेरकाले व्यक्तिले भाई…
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:३४ 0
वृद्ध हुदैं गएपछि प्राकृतिक तत्वले छालाको तन्किने र लचिलोपनलाई घटाउँदछ । आज हामी तपाइँलाई यस्को घरेलु उपचारबारे जानकारी दिन्छौं । जस्ले तपाइँको छालालाई चाउरी पर्न र खुकुलो हुनबाट बचाउँछ । साथै यसले छालालाई तन्काई लामो समयसम्म जवान देख्न…
अब पार्लर गएर हजारौ रुपैया तिर्नु पर्दैन ! घरमै बसी बसी यसरि फेसियल गर्नुस (भिडियो सहित)
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:२७ 0
अहिले वातावरण निकै प्रदूषित हुँदै गएको छ, धूवाँ, धूलो र कामको व्यस्तताले छाला त्यत्तिकै बिगि्ररहेको हुन्छ । अरु बेला छालाको त्यति हेरचाह गर्न नपाए पनि चाडपर्वको मौका छोपेर सबैले छाला राम्रो बनाउने विविध उपाय अपनाउँछन् । यसका लागि घरमै,…
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:२३ 0
माछा खान मनपराउने अधिकांशले यहि सोँच्छन् कि यो अति स्वस्थवर्द्धक खानेकुरा हो। हुन त, माछाको मासुमा ओमेगा-३ फ्याटी एसिड पाइन्छ, जुन मुटु र मस्तिष्कको स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुने खोजबाट पत्ता लागिसकेको छ। त्यसका साथै माछामा प्रशस्तै…
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:२० 0
शारीरिक रुपमा संधै फिटनेश रहिरहनु कसको चाहना हुँदैन र ? तर मानिसहरुको व्यस्त दिनचर्याले शारीरिक अभ्यास दिनानुदिन कम हुँदै जान्छ । जसले गर्दा तपाईको पेटमा बोसो बढेर फिटनेश बिग्रिने हुनसक्छ । हामी प्रायजसो वेट घटाउनमा समय खर्चिरहेका हुन्छौं ।…
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:१६ 0
तौल घटाउने वा तौललाई नियन्त्रण गर्ने काम धेरै नै चुनौतिपूर्ण छ । खासगरी यस्ता मानिसको लागि जो खानामा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । हामी धेरै नै तनाबपूर्ण तथा ब्यस्त जीवन निर्बाह गर्दछौं । जसको कारणले गर्दा शारीरिक ब्यायाम गर्नको लागि हामीसंग समय…
mero sathi tv	 २७ चैत्र २०७४, मंगलवार १५:४८ 0
आजकल धेरै मानिसलाई घुँडा दुख्ने समस्या छ । यसका लागि मानिसहरू अनेकथरीका औषधि प्रयोग गर्छन् तैपनि रोग निको हुँदैन । यहाँ हामी घुँडा दुखाइ निको पार्ने घरेलु तरिका बताउँदैछौं जसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा गडबडी हुँदैन र पीडाबाट पनि मुक्ति पाइन्छ ।…